[Akụkụ Otu] LMDE na omimi: Ntinye | Site na Linux
[Akụkụ Otu] LMDE na omimi: Ntinye
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Nkesa, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Akụkụ mbụ nke onye ndu otu esi etinye, hazie ma hazie LMDE. Na nke a anyị ga-ahụ nwụnye na melite usoro nzọụkwụ site nzọụkwụ.
0.1 Ọkwa Ama: Mbido / Ihe Nwụnye Ihe Ọmụma
1 Gini mere iji LMDE?
2 Wụnye LMDE.
Ọkwa Ọmụma: Mbido / nwụnye ihe ọmụma
linuxmint abụrụla otu n’ime nkesa ndị ama ama nke GNU / Linux, na ọ bụ nke anọ Usoro njikwa a na-ejikarị ya n'ụwa, na-anọ naanị n'okpuru MS Windows, Mac oS y Ubuntu.
Ebe ọ bụ na afọ gara aga, ka mint ezinụlọ a sonyeere ya na ụdị ọzọ akpọrọ LMDE (Mint Debian Mint Linux) na ebumnuche nke ịnye usoro mara mma mana n'otu oge ahụ, ngwa ngwa, kwụsie ike karị ma nke ahụ na-eme ka ụdị Rolling Hapụ.
Ruo taa, a na-eji ya site na nnukwu akụkụ nke Obodo LinuxMint e tinyewokwa oganihu ndị dị mkpa, bụ́ ndị anyị ga-akọwa n’isiokwu ndị na-esonụ.
Gini mere iji LMDE?
Ọsọ, nkwụsi ike, nchekwa, bụ okwu nkọwa nke jikọtara ya na Debian GNU / LinuxOtú ọ dị, ịdị mfe na ịrụ ọrụ adịghị. All ọrụ nke Debian Know mara na ozugbo anyị wụnye sistemụ ahụ, anyị ga-etinye oge ụfọdụ ma mesịa kwadebe ya, wụnye nchịkọta, hazie obere ebe a na ntakịrị ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụrụworị onye ọrụ nwere ahụmahụ nke na-ekwesịghị ịnọchite nnukwu nsogbu dị ukwuu, mana n'ihe banyere ndị mbido, ihe gbanwere. Na LMDE anyị na-azọpụta ọtụtụ ọrụ. Anyị kwesịrị ịwụnye na ihe niile na-arụ ọrụ oge mbụ. O doro anya, anyị nwekwara ike ịme mgbanwe ụfọdụ, mana ha na-agbanwe naanị ihe ọ bụla.
Yabụ, ka anyị hụ otu esi etinye ya.
Ka ịwụnye LMDE anyị nwere ike ịga ibudata saịtị ma belata nke .iso nke na-erugharị 900mb, ya mere odi na nhazi DVD. Anyị nwere ike gbaa ya ọkụ na DVD ma ọ bụ anyị nwere ike ịmepụta Unetbootin na bootable oyiyi si a flash ebe nchekwa. Okwesiri igosiputa ya na, na ebe nrụọrụ weebụ a na-ebudata ya dịkwa LMDE Xfce.
Ozugbo anyị nwere ihe niile njikere, anyị na-amalite PC na nhọrọ nke na-eweli site CD ROM ma ọ bụ USB na anyị kwesịrị Ibu Ibu desktọọpụ nke LMDE na sekọnd ole na ole.
Anyị na-eme ihe arụnyere site na ịpị akara ngosi abụọ Wụnye Mint Mint na anyị na-eche maka nwụnye ọkachamara ga-apụta.
Nhọrọ mbụ ga-abụ ịhọrọ asụsụ. Ọ ga-ghọta na nke a version, ọ bụ ezie na anyị na-ahọrọ Spanish-Castilian, ọkachamara ga-agba ọsọ kpamkpam na Bekee.
Anyị na-aga n'ihu na nzọụkwụ nke abụọ nke ga-ahọrọ Oge Mpaghara. N’okwu a, anyị ga-ahọta obodo ma ọ bụ mpaghara ebe anyị bi.
Ugbu a, anyị họrọ ụdị nke keyboard anyị ji. N'ozuzu, nhazi a ga-abụrịrị ọnụọgụ dabere na asụsụ anyị họọrọ, mana anyị nwere ike ịtọ mgbanwe na aka, dịka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Nzọụkwụ a dị oke mkpa. Nkesa diski bu ihe nzuzu. Anyị ga-arara otu isiokwu iji kọwaa otu esi esi kewaa GNU / Linux, ma ugbu a, m ga-akọwa nkenke usoro ahụ.
Dị ka Windows, ebe nkebi dị C: maka sistemụ sistemụ, na D: maka data onye ọrụ, na GNU / Linux anyị nwere ike ikewapụ nkewa maka ọnụọgụ abụọ na nke ọzọ maka faịlụ anyị. Ihu ọma nkebi ga-eme ka ndị a:
1- Akụkụ mbụ nke ụdị mbụ, e kenyere ya na mgbọrọgwụ "/".
2 - Nkebi nke abụọ nke ga - abụ ụdị Extended nke ga - enwe:
A nkebi nke ụdị Logic maka SWAP jiri okpukpu abụọ nke RAM.
Nkebi nke gicdị gicgha maka ụlọ anyị "/ ụlọ" ya na oghere disk.
Eeh, amaara m na nke a nwere ike iyi obere ihe siri ike, mana ọ bụghị n’ezie. Agbanyeghị, ka anyị na-akwadebe ntuziaka zuru ezu na nkebi na GNU / Linux, ha nwere ike ịmụtakwu banyere isiokwu a njikọ a o nke ọzọ.
N'ihe banyere post a, anyị chere na ị maraworị otu esi esi kesaa ya na nke a agafeela n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Mgbe nkewa, anyị ga-etinye data anyị. Mbụ aha anyị zuru oke. Mgbe anyị aha njirimara, nke bụ onye ọrụ anyị ga-eji iji nweta oge anyị. Mgbe ahụ paswọọdụ anyị na n’ikpeazụ, aha ndị otu anyị.
Ọ gwụla ma ị maara ihe ị na-eme, nzọụkwụ 6 nke ịwụnye idide ị kwesịrị ịhapụ ya dịka ọ na-abịa na ndabara, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwe karịa otu sistemụ na kọmputa gị. Mgbe akụkụ a, ọkachamara ga-egosi anyị nchịkọta nke omume nke usoro ahụ ga-eme na nrụnye ga-amalite.
Ozugbo usoro a gwụchara, nke ga-ewe ihe dịka 5 ruo 10 nkeji dabere na ngwaike nke ngwa anyị, LMDE Ọ ga-agwa anyị na ọ kwụsịrị nwụnye.
Na ebe a nwụnye usoro na-agwụ. Mfe ziri ezi?
Na nkeji na-esote anyị ga-ahụ otu esi emelite sistemụ anyị yana otu esi eme wụnye iwepụ ụfọdụ ngwugwu anyị nwere ike ọ gaghị eji. Anyị ga-egosikwa gị ụfọdụ ndụmọdụ iji bulie sistemụ anyị ntakịrị karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » [Akụkụ Otu] LMDE na omimi: Ntinye
N'ikpeazụ enwere ezigbo nkuzi banyere otu esi etinye LMDE; D. M ga-atụ anya nkuzi nke abụọ, ebe ọ bụ na achọrọ m ịma otu esi esi wụnye mmemme, melite, wdg: D. Ozugbo m matara na m na-aga Linux Mint!
PS: Magburu onwe blog, ọ na-amalite na ọ bụ phenomenal 😛
Enwere m olileanya ibipụta isiokwu na-esonụ n'oge na-adịghị anya 😀
Daalụ maka ikwu
Ego ole ka distro a na-eri, ya bụ, kedu ihe ngwaike chọrọ ka ịchọrọ, ebe m nwere enyi nke bidoro Debian 6 na onye ogbenye ahụ na-agabiga nnukwu ọrụ, atụụrụ m distro a, mana achọrọ m ịma ihe ndị achọrọ, ebe ọ nwere p4 na 512Mb nke ra na cpu na 2.4.
Gwa enyi gị ka o jiri Xfce nwaa ụdị a. M na-eji ya efe elu.
Echere m na enwere ike iji LMDE na ụdịdị ahụ, mana atụla anya na ọ ga-aga nke ọma dịka a ga - asị na o nwere 1GB RAM. Otú ọ dị, dị ka Carlos si kwuo, mbipute ahụ na Xfce ga-efe ala .. 😀
Ejiri m 512 ebule wụnye Mate maka nwanne m nwanyị na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọkachamma Tutorial 😉
Daalụ maka nkuzi ahụ, ọ dị mma maka anyị neophytes n'okwu ahụ, m ga-enwe mmasị ịmatakwu na m ga-enwe ekele maka tupu ị bipụta nkuzi nkuzi na-esote ka m wee nwetakwuo ihe ọmụma banyere ọmarịcha distro a, ekele m na ekele gị ọzọ.
Edeelarị nkuzi ndị a 😀
Agba nke 1
Akụkụ nke 2
Agba nke 3
Agba nke anọ
agụ ụlọ dijo
Otu ajụjụ M na-agbasi mbọ ike ịwụnye LMDE ebe ọ bụ na nrụnye na-agbazigharị mgbe ọ na-ekwu "dinggbakwunye onye ọrụ na sistemụ", gịnị ka nke a nwere ike ịbụ?
You kwadoro njirimara nke ISO gị? O nwere ike ịbụ na nke a rụrụ arụ;).
Kedụ ka esi ahapụ lmde na Spanish?
magburu onwe distro, na-atụ aro!
Brazil ga-emekọ aka na mmepe nke LibreOffice na OpenOffice